Fampidinana: 6,883 alaina 919,455 fotoana.
Ianareo izay efa niandry tamim-paharetana ireo topy maso momba ny F28 p3d , aza miandry intsony. Ireto misy sasany farany tifitra anatiny mampiseho ny fivoaran'ny modely mahafinaritra sy ny asa vita. Ireo tifitra ireo sy ny maro hafa dia nampiana tamin'ny pejin'ny vokatra ka mendrika ny fitiliana amin'ny alàlan'ny pikantsary etsy ambony koa.
Ny sidina fotsiny dia mientanentana hitondra anao karazany efatra amin'ny jet regional F28 Fellowship - ny 1000 ka hatramin'ny 4000. Nambara tamin'ny 1962, ny F28-1000 dia nanidina voalohany tamin'ny 1967 ary niditra tamin'ny serivisy seranam-piaramanidina tamin'ny 1969. Ny variana 2000, 3000 ary 4000 dia nanaraka. ny taona 1970, ary nifarana ny famokarana tamin'ny taona 1987. Nanjary nalaza ilay fiaramanidina ary niditra ho serivisy seranam-piaramanidina eran'izao tontolo izao, ary nifarana tamin'ny taona 2018 ny asa ara-barotra farany.
Ny F28 no hanararaotra ny farany teknolojia toa ny fitaovan'ny PBR sy TFDi RealLight ary TrueGlass hamoahana ny fahamendrehana hita maso. Ny sarimiaina azo tanterahina dia misy ny wing-flex, ny mpandeha rehetra, ny serivisy ary ny varavaram-pitaterana, ary ireo mpanimba miavaka sy airbrake mitaingina rambony.
Nifindra tany amin'ny vala-boaloboka, ny toeran'ny Kapiteny, ny Co-Pilot ary ny seza mitsambikina dia maodely miaraka amin'ny switch, knobs ary levers rehetra izay mihetsika sy miasa. Ny fiaramanidina dia hanasongadinana autopilot, kaody hydraulic, herinaratra, mandeha ra maotera, rafitra solika ary pressurisation. Ny fitafiana sy ny ranomaso miorina amin'ny sary be dia be momba ny fanovozana sy ny feo no amboarina dia hamorona tontolon'ny cockpit tena misy, miaraka amina dinamika manidina tena azo tanterahina mamita ny traikefa lalina.
Ny ekipan'ny fampandrosoana ny sidina Just Flight dia nivelatra ary ny mpikambana ao amin'ny ekipa vaovaontsika dia mitondra traikefa an-karena amin'ny fampandrosoana ny seranam-piaramanidina sarotra. Midika izany fa ny F28 dia tsy ho tsara tarehy fotsiny fa hanasongadinana ny kaody fanao manerana azy, ao anatin'izany ny fampiasana ny rafitra ivelany hanalavirana ny fetran'ny simulation, ary ny fientanam-piaramanidina tena azo antoka miaraka amin'ny fidiran'ny ekipa F28 tena izy.
Sokajy: Vaovao Prepar3D
Amin'ny Alatsinainy alina dia hanome iray hafa an'ny 777 izahay ho an'ny ekipa beta mba hijerena ireo fanovana kely nataontsika, ary hanananay antoka fa vonona ny hamotsorana ny vokatra. Hanome azy ireo andro vitsivitsy miaraka amin'izy ireo isika alohan'ny hanosika antsika mivantana ny vokatra ary noho izany dia manavao ny torolàlana momba ny famoahana antsika amin'ny 25FEB mankany 27FEB aho.
Ny tsara Vaovao dia ny vita ny vokatra, ary mila fanitsiana madinidinika vitsivitsy fotsiny izay kosmetika amin'ny fizotry ny fametrahana sy ny antontan-taratasy. Tena mahazo aina izahay amin'ny vokatra ihany, saingy nanana fikorontanan'ny fandaharam-potoana tsy PMDG kely izahay (amin'ny endrik'ilay fandaharam-potoanako manidina dia nivadika tamin'ny tafio-drivotra adala izay nisy taminay tamin'ny herinandro lasa teo) ary izany dia manosika antsika hanery andro vitsivitsy mba hahafahan'ny mpilalao marina rehetra (anisany ahy!) ho eo amin'ny toerana mety hanohanana ny famotsorana.
Navoaka: 23 Febroary 2021
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Indianapolis (IATA: IND, ICAO: KIND, FAA LID: IND).
Seranam-piaramanidina iraisampirenena izay misy 11 kilaometatra atsimo andrefan'ny afovoan-tanànan'i Indianapolis any Marion County, Indiana, Etazonia. Izy io dia tompon'ny orinasa Indianapolis Airport. Ny drafitra nasionaly momba ny seranam-piaramanidina federaly (FAA) momba ny seranam-piaramanidina serivisy iraisana ho an'ny 2017–2021 dia nanasokajy azy io ho toy ny ivon-toerana fanaovana asa soa voalohany.
Fitaovana mahazatra amin'ny tany
Fampisehoana sary manokana
Autogen manokana napetraka tanana
Zavatra 3d feno pitsopitsony
Trano feno antsipirihany
Fanamarihana ambanin'ny tany
Zavatra maromaro mijanona
Fanazavana amin'ny alina
Jetway mifindra. (SODE)
p3d fisie zanatany
Navoaka: 26 Febroary 2021
Tao amin'ny forum Orbx, Ed Correia dia nanome fanavaozana ny fampandrosoana amin'ny openLC Asia ho an'ny p3d . openLC dia manova ny landclass ao anaty sim-nao mba hifanaraka tsara amin'ny tena tany, ary manome traikefa manan-karena kokoa ho an'ny antsipirihany rehefa manidina ianao:
Salama daholo, fanavaozana kely ary topi-maso vaovao.
Elaela kokoa noho ny noeritreretina ny fampandrosoana satria ny variant P3Dv5 dia mila asa bebe kokoa amin'ny fanilikilihana ny làlana faharoa sy fahatelo. Raha tsy misy ireo fanilihana ireo dia mahita làlana marobe madinidinika mamakivaky ny firafitry ny tontolontsika isika izay tsy mahitsy. Izany dia tena voatonona ao amin'ny kaontinanta indiana.
Izahay koa dia miantoka fa hiara-miasa amin'ny vokatra Vector na misy izy na koa mampitombo ny enta-mavesatra. Na izany aza, Eugene dia azo zahana amin'ity 7 andro isan-kerinandro ity ary tsy zava-dratsy izany!
Ny faritra voalohany koa dia nitombo kely ny habeny (faritra maloka mena) mba hampiasa tsara kokoa ny firafitry ny landclass.